FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA MPIAMBINA BOXER - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana mpiambina boxer
Alika mpihetsiketsika mpiady totohondry / mpiandry alemà
'Ity no fitiavako ny fiainako, Jada !!! Izy dia mpiandry ondry 2 taona mifangaro amin'ny tara-masoandro. Betsaka ny anaram-bosotra nomeny dia misy an'i Jada pup-pup, Jada Funk Master, Jada-boo, Miss Jay, ary Baby J. Feno fiainana ary maniry ny hisarika ny saina foana, tsy avelako any aoriany mihitsy. Tena mamy izy ary sakaiza sakaiza tsara, saingy tsy manonona azy akory izany lafiny ratsy . Manana ny sainy samirery izy fa mbola toa anao miresaka aminy toy ny mitovy , tsy handao anao mihitsy izy. Nitaiza an'i Jada aho hatramin'ny nanavotako azy avy tany Atlanta Humane Society fony izy 8 herinandro. Faly be aho fa manana azy amin'ny fiainako. Tsy haiko izay hataoko raha tsy eo izy! '
Ny mpiandry ady totohondry dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny mpanao ady totohondry ary ny Mpiandry Alemanina . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
'Max the Boxer / German Shepherd mifangaro alika kely amin'ny 4 volana. Alika fialofana izy ary milanja 40 + lbs amin'ity sary ity. '
Vinny the Boxer / Shepherd mifangaro amin'ny 8 volana— 'Vinny zazalahy tsara. Tena sariaka ary milalao tsara amin'ny alika hafa lehibe sy kely. Milalao tsara amin'ny saka telo koa izy. Tiany ny mitaingina fiara sy kamio. '
Vinny the Boxer / Shepherd mifangaro amin'ny 8 volana
'Ity no zanak'alika Shepherd-Boxer, Paige. Hitako tamin'ny Internet aho ary raiki-pitia tamin'ny sariny. Nandeha 30 kilaometatra aho handeha haka azy. Nopetahana ny rambony ... nilaza ilay tompona teo aloha fa tsy mety ny rambony rehefa teraka. Saingy mbola tiany ny manenjika ny fotony na dia tsy tratrany aza. Nahita azy nanenjika azy vetivety anefa aho. Ary rehefa faly izy dia mihozongozona ny vatany iray manontolo. Alika kely mahafatifaty izy ary ny sakaizany akaiky indrindra dia ny zanako lahy iray taona. Tsikaritro fa Boxer-Shepherds dia tsy hybrid malaza, saingy mieritreritra aho fa nahita ny iray amin'ireo karazana tsara indrindra nisy hatrizay. '
Paige the Boxer / Shepherd mix puppy
Kynnley dia fifangaroan'ny mpiandry ondry / boxer alemana tsara tarehy. Salama tsara izy. 4 taona izy amin'ity sary ity. Tiany ny mihazakazaka indraindray, fa matetika izy no mandry. 48.7 pounds eo ho eo izy. Izy dia manana saka alika hafa antsoina hoe Biskit, izay mifanaraka tsara nefa miady be. Tsy misy zava-dehibe.
Kynnley the Boxer / Shepherd mifangaro amin'ny 4 taona
Lisitry ny alika mpiompy alemanina mpiompy
sheltie Aostraliana alika kely mpiandry ondry Mix
brindle sy fotsy lavaka omby
sary an'ny alika kely mastiff omby
sary pitbull orona manga
alika kely cocker tzu amidy